विकासका सम्भावनालाई साकार पारिने - Pradesh Today विकासका सम्भावनालाई साकार पारिने - Pradesh Today
विकासका सम्भावनालाई साकार पारिने
माघ १४, २०७६ प्रदेश टुडे
टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति, दोघरेमा बहुआयामिक सभाहल निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन र नेपाल पर्यटन वर्ष सन् २०२० लाई सफल बनाउनका लागि तुलसीपुर महोत्सव–२०७६ जारी छ । महोत्सव सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य ठूलो छ । उद्देश्यमा पुग्नलाई कति आर्थिक संकलन हुन्छ, एउटा सोचनीय विषय होला ? तर आयोजक संस्था तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले उठाएका विषय गौरवका योजना हुन् । महोत्सवबाट करिव एक करोड संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो रकमले संघले उठाएका विषयका लागि त पर्याप्त पक्कै छैनन् तर ति विषय बहसमा आउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
टरिगाउँ विमानस्थलमा ठूलो विमान अवतरण गराउने संघले देखेको सपनामात्र होइन् आम दङ्गालीको हो तर अहिलेसम्म ओझेलमा पर्ने गरेको छ । राजनैनिक दलका नेतृत्वले चुनावका समयमा यो विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएपनि चुनावपछि हराएर जाने गरेको छ । अहिले महोत्सवमार्फत विमानस्थलको स्तरोन्नति निर्माण गर्ने प्रमुख विषय भएपछि बहसको विषय बनेको छ । संघले यसअघि सञ्चालन गर्ने गरेको महोत्सवबाट पनि विभिन्न किसिमका सार्वजनिक महत्वका योजनाले सार्थक पाएका छन् । अहिले सञ्चालन गरेको महोत्सवबाट पनि ठूला र महत्वकांक्षा योजना सारिएको छ । महोत्सवले उठाएका विषयले के पूर्णता पाउलान् ? किन ठूला महत्वकांक्षी योजना मात्रै संघले अघि सार्ने गरेको छ त ? महोत्सव आयोजक संस्था संघका विभिन्न पदाधिकारीसँग प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ
सन् २०२० लाई सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । सरकारको अभियानलाई सफल बनाउनसँगै हामीले विशेषगरी दोघरेमा निर्माणाधिन सभाहलको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि तुलसीपुर महोत्सव सञ्चालन गरेका हौँ । त्यसैगरी दाङबासीको ठूलो जहाज चढ्ने सपना छ ।
ठूलो जहाज चढ्ने नागरिकको सपनालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? भनेर तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सव सञ्चालन गरेको हो ।
महोत्सवबाट संकलन भएको रकमले तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तोरन्नति गरी ठूलो जहाज बसाउने हाम्रो सपनाभन्दा पनि योजना हो ।
अहिले तुलसीपुरमा तुलसीपुर महोत्सव सञ्चालन गरिसकेपछि मात्रै नभएर पहिले पनि टरिगाउँ विमानस्थलको विकास, स्तरोन्नतिका लागि हामीले विभिन्न समयमा पहल गरिरहेका छौँ ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ एउटा व्यापारिक संस्था भएका कारण पनि यहाँको आर्थिक समृद्धिसँगै विकासका सम्भावनालाई साकार पार्न हामी निरन्तर छौँ ।
अहिले टड्कारो आवश्यकता भनेको तुलसीपुरमा बहुआयामिक सभाहल निर्माण र टरिगाउँको विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नु हो । टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि महोत्सव सञ्चालन गर्नुको अर्को उद्देश्य के हो भने सरकारलाई नैतिक दवाव पनि हो ।
किनभने महोत्सवबाट संकलन गरेको आर्थिकले मात्र विमानस्थलको स्तरोन्नति सम्भव हुने कुरा भएन् । यसको लागि जुन अहिले विभिन्न माध्यमबाट तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलको चर्चा चलेको छ ।
यो भनेको नै सरकारलाई एउटा नैतिक दबाव हो । महोत्सव उद्घाटन गर्न आउनुभएका पर्यटन मन्त्रीलाई टरिगाउँ विमानस्थलको आवश्यकतासहितको हस्ताक्षर संकलन गरेर मन्त्रीलाई बुझाएका छौँ । दङ्गालीका लागि टरिगाउँ विमानस्थलको विकास महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर मन्त्रीज्यूलाई एक किसिमको नैतिक दबाव परेको छ ।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई आफैपनि विमानस्थलमा पुगेर अवलोकन गरिसकेपछि विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न आफूले कुनै किसिमको कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यसकारण पनि महोत्सवको एउटा निकै सकारात्मक कुरा हो । विमानस्थलमा सानो हुँदा दङ्गालीले सास्ती पाएका छन् । ठूला जहाज बस्न नसक्ने अवस्थामा हामीले यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर महोत्सवमार्फत तीनैतहका सरकारलाई एक किसिमको सन्देश दिएका छौँ । विमानस्थलमा जग्गा पनि कुनै किसिमको समस्या छैन् ।
जग्गा पनि प्रशस्त भएका कारण विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि अब इच्छाशक्ति र बजेट भए पुग्छ । विमानस्थलको स्तोन्नतिका लागि अहिले पनि केही बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्था छ । जतिसक्दो छिटोभन्दा छिटो बजेट कार्यान्वयनका लागि नागरिकस्तरबाट दबावको खाँचो छ ।
हामीले नगरे कसले गर्ने ? भन्ने उद्देश्यका साथ तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ यहाँको विकासका लागि निरन्तर लागिरहेको छ । हाम्रो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ छैन् ।
महोत्सवबाट संकलन भएको रकम तुलसीपुर अर्थात् दाङकै विकासका लागि खर्च हुने कुरा पनि म यहाँको मिडिमार्फत नै प्रतिवद्धता गर्दछु । हामीले विगतमा पनि यस्ता किसिमका मेला महोत्सव सञ्चालन गरि स्थानीयस्तरको विकास निर्माणमा ठूलो सहयोग गरेका छौँ ।
यसअघि सञ्चालन भएको महोत्सवले दोघरेमा बहुआयामिक सभाहल निर्माण गरिरहेका छौँ । काम गर्दै जाँदा बजेटको समस्या देखिएपछि अहिले फेरि महोत्सव सञ्चालन गर्नुपरेको हो । हामीले निर्माण थालेको सभाहल निर्माण सम्पन्न भएमा कम्तिमा विभिन्न किसिमका राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम गर्न सहज हुनेछ ।
निर्माणाधिन सभाहलमा कम्तिमा पनि एक हजार जना अट्ने क्षमता छ । सभाहलको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा छ, अहिले अब करिब १० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ ।
ति कामलाई पूर्णता दिनका लागि उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सव सञ्चालन गरेको हो । संकलन भएको रकमले तुलसीपुरकै विकास निर्माणमा सहजता ल्याउने छ ।
यहाँका नागरिकले नै एक किसिमको परिवर्तन पाउनुहुनेछ । विकासमा सरकार एक्लै अथवा नागरिक एक्लैलै सम्भव छैन् । सरकारको अभियानमा नागरिकस्तरबाट पनि सहयोग र साथ हुन आवश्यक छ ।
कुलो नचल्दा रोपाईमा समस्या
साउन ०३, २०७६
इटहरीका जनप्रतिनिधि तुलसीपुरमा
लोकमणि आचार्यको स्मृति दिवस
हत्या भएको सात वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ
भदौ २०, २०७५